IMaple Ridge Cottage - I-Airbnb
IMaple Ridge Cottage
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguWeronika
Indlwana yaseMaple Ridge yindlu entsha, yangoku, 3 yokulala 1 igumbi lokuhlambela eli-1, elisendulini enemithi yeemaple esele ikhulile.
Buyela emva kwaye uphumle nabahlobo kunye nosapho kwiincopho zemithi kwaye wonwabele ibhafu eshushu ekwidesika enkulu.
Pakisha iibhegi zakho kwaye wonwabe iMaple Ridge Cottage namhlanje!
I-cottage ye-Maple Ridge ibekwe eBarry's Bay, ON, eyi-3.5 iiyure ukusuka eToronto, iiyure ezi-2 ukusuka e-Ottawa, kunye ne-50 min kude ne-Algonquin Park ye-East Gate. Yonwabela ubuhle bendalo kunye nokuzola kule ndlu iphezulu yenduli.
IMaple Ridge ikufutshane neendlela ezininzi zokuhamba intaba, iindledlana zeemoto zekhephu, unxweme loluntu (usapho olunobuhlobo kwaye lulungele ukuloba umkhenkce) kunye nokuqaliswa kwesikhephe.
I-cottage yethu ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici (i-stove top, i-oven convection, ifriji, iketile, iimbiza kunye neepani, izitya kunye ne-cutlery). Kukho ii-propane BBQs ezimbini kumgangatho, kunye netafile yomlilo kunye nomgodi womlilo.
I-cottage inamagumbi okulala ama-3. Igumbi lokulala eliphambili lixhotyiswe ngomgangatho wehotele we-memory foam queen size mattress. Igumbi lokulala libonelela ngokufikelela kwidesika ngocango lwepatio.
Igumbi lokulala lesibini likwanomandlalo we-memory foam queen size single roll out trundle.
Igumbi lokuhlala linebhedi ephindwe kathathu.
Igumbi lokuhlala linobukhulu obuyindlovukazi yokutsala isofa.
Senza konke okusemandleni ethu ukwamkela zonke iindwendwe kwaye sifuna ukwenza ukuhlala kwakho nathi kube mnandi kangangoko. Ukuba ubhiyozela umtshato, isikhumbuzo, usuku lokuzalwa okanye umcimbi okhethekileyo, nceda usazise ngexesha lokubhukisha.
I-cottage ikwimizuzu eli-15 kude neBarry's Bay, imizuzu eli-10 kude neCombermere, kunye nemizuzu eli-10 kude neWilno.
IBarry's Bay inesibhedlele, ikhemesti, iivenkile ezi-2 zegrosari, iLCBO, iBeer Store, kunye neendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- Weronika
Hi! I’m Weronika - an entrepreneur and avid traveller! As someone who loves to travel, I want to make your stay as memorable as I would want mine to be!
Ukuba kuyafuneka ndingenziwa ndifumaneke ngokuqeshwa. Ngomntu okanye ngokoqobo.